Tatitry ny kaonferansa fanamarinana taona - The Reward Foundation
Home Tatitra momba ny fihaonambe momba ny vanim-potoana
Ny manampahaizana manerantany dia mijery ny fanamarinana taona ho an'ireo tranonkala vetaveta
Antony 1.4 tapitrisa hihetsika
Isan'ny ankizy mahita sary vetaveta any UK isam-bolana
John Carr, OBE, mpitan-tsoratry ny fiaraha-miasan'ny ankizy ao UK momba ny fiarovana ny Internet miaraka amin'ny The Reward Foundation, dia namoaka ny tatitra farany an'ny International Age Verification Virtual Conference izay natao tamin'ny volana Jona 2020. Anisan'izany ny mpiaro ny zon'olombelona, ​​mpisolovava. , akademisiana, tompon'andraikitra amin'ny governemanta, neurosains sy orinasa teknolojia nalaina avy amin'ny firenena sivy amby roapolo. Ny kaonferansa dia nandinika:
Zon'ny ankizy ny miaro amin'ny loza ary manana fanjakana adidy hanome izany ny fanjakana. Mihoatra noho izany, ny ankizy dia manan-jo hanana torohevitra tsara sy hanana fanabeazana sahaza ny taona momba ny firaisana ara-nofo sy ny anjara azo raisina amin'ny fifandraisana salama sy mahasambatra. Ity dia omena indrindra amin'ny sehatry ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanabeazam-pirenena. Tsy manan-jo hanana pôrnôgrafia ny ankizy.
Ny teknolojia fanamarinana taona dia nandroso tamin'ny fipetrahan'ny rafitra mora vidy sy mora vidy izay afaka mametra ny fidirana latsaky ny 18 taona amin'ireo tranonkala vetaveta an-tserasera. Izy io dia manao izany miaraka amin'ny fanajana ny zon'ny tsiambaratelo an'ny olon-dehibe sy ny ankizy.
Ny fanamarinana ny taona dia tsy bala volafotsy, fa azo antoka fa bala io. Ary bala mitodika mivantana handavana ireo mpivarotra sary vetaveta an-tserasera amin'ity tontolo ity izay misy anjara andraikitra amin'ny famaritana ny firaisana ara-nofo na ny fanabeazana ara-nofo ananan'ireo tanora.
Ny hany olana fanenenana any Angletera amin'izao fotoana izao dia mbola tsy fantatsika tsara hoe oviana ny fepetra fanamarinana taona nifanaovan'ny Parlemanta tamin'ny 2017 no manan-kery na dia tamin'ny herinandro lasa aza fanapahan-kevitra ao amin'ny Fitsarana Avo mety hampandroso antsika.
John Carr, OBE, ho an'ny antsipiriany momba ny lalàna, tel: +44 796 1367 960.
Mary Sharpe, The Reward Foundation, ho an'ny fiantraikany amin'ny ati-dohan'ny tanora,
Valandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazety.